Naya Post Nepal | पल र समीक्षाको सम्बन्धमा नयाँ ट्विस्ट ? ‘अब समय आउँदैछ, यथार्थ खुलाउनेछु’
पल र समीक्षाको सम्बन्धमा नयाँ ट्विस्ट ? ‘अब समय आउँदैछ, यथार्थ खुलाउनेछु’
चाँडै वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने समेत उनको भनाइ छ । बिहीबार समीक्षाले लेखेकी छिन्, ‘म लामो केही भन्दिँन । २४ अक्टोबर २०२१ मा मेरो फेसबुक वालमा लेखिएको यो स्टाटस वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा छ ।
जुन कसैको अनुनयमा लेखेको थिएँ । अब समय आउँदैछ, यथार्थ खुलाउँदैछु ।’तर, यो स्टाटस पोस्ट गरेको आठ मिनेटमै समीक्षाले त्यसलाई डिलिट गरेकी छिन् ।
२०७८ माघ ६, बिहीबार प्रकाशित0Minutes 159 Views